Xog: Ciidamo Huwan ah oo la wareegay Deegaanka Bariire, Ujeedada Weerarka, Maxaase laga faaiiday,? – Hornafrik Media Network
Ciidamo isugu jira Soomaali, Maraykan, iyo AMISOM ayaa Saaka waabarigii dhowr Jiho ka weeraray Magaaladda Bariire ee Gobalka Shabeelaha Hoose, Waxaana Dagaalkan oo socday Saacado ay ugu dambayntii Ciidamadda Huwanta ka saareen Bariire Maleeshiyadda Alshabaab, iyadoo halkaasi imminka ay si buuxda uga talinayaan Ciidamadda Isbahaysiga.
Dagaalkan oo intii uu socday la isku adeegsaday Hub Culus iyo mid fudud ayaa la xaqiijiyay inay ka qayb qaateen Diyaaradaha Qumaatiga u kaca Ciidamo dhinaca Cirka ay kaga soo daateen Bariire jihooyin kala duwan, taasoo sababtay inay Alshabaab dib u garasho sameeyaan. Waxaana Wararka ay Hornafrik heshay ay sheegayaan in Weerarkaasi ay ku dhinteen illaa iyo 7 Maleeshiyaad Alshabaab ah, 3 Askari oo ka tirsan Ciidamadda Huwanta oo aan la kala cadayn Dalalka ay u kala dhasheen, Waxaa sidoo kale ay Ciidamaddu huwantu qabteen Maleeshiyaad Alshabaab ah, kuwaasoo nolol ay hadda ku hayaan.
Hawlgalkan waxaa lagu sheegay Ujeedadiisa inay la xiriiro Macluumaad dhinaca Sirdoonka ah oo la helay oo sheegaya in halkaasi lagu diyaarinayo Weerar Culus oo la mid ah kii Ceel Cadde oo ay doonayeen Alshabaab inay ku weeraraan Saldhigyo ay leeyihiin Ciidamadda AMISOM, Waxaana Bariire lagu diyaariyay Qaraxyaddii Weerarkaasi uu ku billaabin lahaa, Hub ay ka mid yihiin Gantaaladda Garabka laga rido oo loo adeegsan lahaa Weerarka, iyo qalab kala duwan oo ay isticmaali lahaayeen.
sidoo kale waxaa Bariire ku sugnaa Maleeshiyaadkii Weerarka ay u adeegsan lahaayeen Alshabaab, kuwaasoo noqday wax la dilay, wax la qabtay, iyo wax baxsaday.
Maxaa laga faaiiday Hawlgalka Huwanta,?
Hawlgalkan waxaa lagu guulaystay in lagu baajiyo Weerar ay khasaare badan ku gaysan lahaayeen Alshabaab oo ay doonayeen in lagu bartilmaameedsado Nabad Illaaliyayaasha Midowga Afrika, Waxaa sidoo kale Weerarkan lagu soo qabtay Qalab Ciidan oo ay ka heleen Kooxdu Weeraro dhowr ah oo ay ku qaadeen Fariisimo AMISOM iyo Ciidamadda Somalia, sidoo kale waxaa Weerarkaasi lagu soo helay Naqshadda iyo Istaraatiijiyadaha ay u isticmaalaan Weerarkaasi.
Ciidamadda Huwanta ee tagay Bariire waxay sidoo kale gudaha u galeen Xarun ka mida Xarumaha Warbaahinta Al-Kataaib iyo Idaacada Andalus ay ku lahaayeen Bariire, waxaana ay soo rarteen Qalabkii ay isticmaalayeen, iyadoo sidoo kale warar soo baxay ay sheegayaan in la qabtay Wariyayaal ka tirsan Andalus oo ah Idaacad ku hadasha Afka Kooxda Alshabaab.
Lama oga in Ciidamada qabsaday deegaanka Bariire ay sii joogi doonaan iyo in kale, balse waxaa horay u jiray dhowr jeer oo weeraro sidan oo kale ugu qaadeen deegaanada Shabeellaha Hoose ayay dib isaga soo laabteen.
Al-Shabaab ayaa la sheegay inay dib u gurasho ka sameeyeen deegaanka Bariire, waxaana ay dhaq dhaqaaqyo ciidan ka wadaan deegaanada kale ee ay ku sugan yihiin.
Bishii May ee sanadkan ayay aheyd markii askari Mareykan ah lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanka Bariire, kadib markii ciidamada dowladda oo taageera ka helaya Ciidamo Mareykan ah ay weerareen saldhigyo Al-Shabaab ku lahaayeen deegaankaas.
Jowhar oo lagu dilay Qof Rayid ah.